Lynda ANDRIATSITONTA fananganana orinasa, lakile	0 Commentaire fév 9, 2019
Nahatratra 2000 ny olona nanatrika ny famelabelarana arahina adi-hevitra momba ny lakile mahomby amin’ny fananganana orinasa (La clé de la réussite à la création de l’entreprise). Andiany faharoa izy ary ny fikambanana ADC (Association Devoir et Citoyen). Ny asabotsy 9 febroary 2019 lasa teo, tao amin’ny Kianja mitafo Mahamasina no nanatanterahana izany. Nandray anjara tamin’ny famelabelarana ny solontenan’ny ministeran’ny indostria izay nahitana ny EDBM sy ny tranoben’ny varotra. Hita tao ihany koa ny solontena avy amin’ny sampandraharahan’ny hetra. Ireo dingana tokony arahina amin’ny fananganana orinasa no nohazavain’izy ireo. Nanome toro-làlana momba ny findramam-bola sy ny taratasy ilaina rehetra ihany koa ny solontena avy amin’ny banky. Ankoatra izany, nizara ny traikefany sy ny dingana nodiaviny tamin’ny mpanatrika ihany koa ireo mpandraharaha tahaka an’i Toky Ny Aina Razafindrasolo avy amin’ny orinasa Remax fusion dualtek, Rivo Louis Amedée avy amin’ny Campa (bureau de change travel exchange, restaurant escale coffee shop, hôtel la residence des palmiers) ary i Aina Wide avy ao amin’ny “wide Europe et wide Madagascar”.
Nambaran’ny filohan’ny fikambanana ADC, Herizo Ramanambola fa tanora avy amin’ny oniversite miankina amin’ny fanjakana sy tsy miankina ny ankamaroan’ireo nanatrika ny famelabelarana. Efa manana ny hevitra entina hananganana orinasa izy ireo ankehitriny satria efa nomen’ny mpanao famelabelarana ny lakile rehetra, hoy hatrany izy. Mitaky ezaka sy saina tia karokaroka anefa izany, araka ny toro-hevitra nomen’ireo mpandraharaha. Efa manipy teny sahady ny fikambanana ADC fa hampiofana tanora miisa 60 momba ny teny sinoa ka raha te hisitraka izany dia mila miditra mpikambana.
‹ SECOURS ISLAMIQUE FRANCE: L’appui au relèvement des habitants d’Ankilimahavelo	› MÉTÉO MADAGASCAR : Tendance du temps pour la semaine du 11 au 17 février 2019